Amboatavo Itaosy Saron’ny polisy ilay mpanendaka aman-taonany maro
Teo Amboatavo Itaosy no tra-tehaky ny polisy ny jiolahy iray voky traikefa aman-taonany maro amin’ny fanendahana zava-tsarobidy. Araka ny fampitam-baovao ofisialin’ny polisim-pirenena, lehilahy iray, 20 taona no voasambotry ny polisim-pirenena avy ao amin’ny CSP Itaosy ny alatsinainy faha 9 septambra 2019
Mitohy ihany ny asan-dahalo Omby 60 indray no very tany Maintirano
Omby miisa 60 no indray very tao amin’ny kaominina Andranovao, distrikan’i Maintirano, faritra Melaky.
Raharaha omby any Antanimeva Te hihaona mivantana amin’ny praiminisitra ireo voakasika
Tsy mbola nahitam- bahaolana hatramin'izao ilay resaka omby an- jatony nalain'ny miaramila mpampandry tany tao amin'ny fokontany Maharihy ao Morombe sy nogiazany ao Antanimeva.
Mijaly ny Malagasy Olana tsy mety voavaha ny tsy filaminana
Saika isan’andro no ahenoana sy isehoana toe-javatra ratsy foana mahakasika ny filaminana sy ny manodidina izany eto Madagasikara.
Jiolahy voatifitra teny Ampefiloha Mpanafika “cash point” sy tobin-tsolika…
Andry no anaran’ilay jiolahy voatifitra teo Ampefiloha. Efa jiolahy raindahiny izy io, hoy ny loharanom-baovao iray avy ao amin’ny polisim-pirenena.
Fitifirana teny Ampefiloha Nidoboka am-ponja ilay polisy
Nidoboka am-ponja ilay polisy nitifitra ilay voalaza fa jiolahy nifanenjehana tamin’ny moto saika hanao fanafihana teny Antsahamanitra, ary tra-tehaka tetsy Ampefiloha ny 23 aogositra 2019 lasa teo,
Jiolahy efa nibaboka notifirina ho faty Mampiahiahy ilay tranga tetsy Ampefiloha
Ny ankamaroan’ny mpanara-baovao no nihorin-koditra nahita ny zava-nitranga tetsy Ampefiloha ny zoma teo nandritra ilay gidragidra nifampitifiran’ireo polisin’ny SAG na « Service anti-gang » tamina tovolahy miisa 3 voalaza ho jiolahy.
Nivahiny tao amin’io radio tsy miankina io izy tokony ho tamin’ny 10h30 atoandro tamin’io fotoana io, saingy niseho ny zavatra tsy nampoizina. Afa-niala io depiote io, ary afaka nanaitra ny manodidina. Raikitra ny fifanenjehana saingy tafatsoaka ireo jiolahy ireo. Tsy fantatra mazava na lonilony politika no saika hifofoana ny ainy na asan-jiolahy tahaka ny asan-jiolahy mitam-piadiana rehetra. Efa mandeha ny fanadihadiana mikasika io toe-draharaha hafahafa io, raha ny fampitam-baovao. Marihina moa fa depiote lany tamin’ny anaran’ny lisitra tsy miankina Atoa Said Zakaniaina Mahafaly Joseph.